Maitiro Ekusarudza Wheelchair Ruvara - Ruvara Mafuremu
Pakusarudza nyowani wiricheya, sarudzo yemavara pasina mubvunzo ichave imwe yesarudzo dzakaomarara iwe dzaunofanirwa kutora. Iwe unoda ruvara runoratidza hunhu hwako uchiri kuita. Ichi chizororo chechinyorwa chino chinobatsira kuita kuti sarudzo yako ive nyore.
wiricheya Ruvara - Iwo Basics
Mavara anozivikanwa kwazvo e mavhiripu nhema, bhuruu, sirivheri uye tsvuku. Bhuruu inoratidzika kunge inonyanya kufarirwa mutsika dzekuMadokero. Zvisinei, kune avo vanoda mijenya yakawanda sarudzo uye vamwe vagadziri vanopa anosvika makumi maviri nemashanu mavara (echinyorwa mavhiripu). Simba mavhiripu vane sarudzo shoma nekuda kwezvikamu uye kuomarara kwedhizaini.
Iko "Kushanda" kwe wiricheya ruvara
Tsvagurudzo yemavara inokanganisa vanhu isainzi - iyo inosunga kumashure pakusarudzika kwemavara kunge chikamu chinonyanya kushushikana che wiricheya sarudzo. Zvakangodaro, kupfuura psychology yekupenda, pane zviripo "mashandiro" kune iyo sarudzo sarudzo ye mavhiripu, zvakare, uye nekuziva mashandiro acho kunobatsira pakuita kwesarudzo uye kuzadzikiswa.
Iko Kutaridzika uye Kunzwa kwe wiricheya
Kutarisirwa kuri nyore uye kutarisisa kunoshanda kwe a wiricheya'' Kumusoro kupedzisa mukufamba kwenguva kwakakosha kune vanhu vazhinji, uye kusarudzwa kwemavara kunoita chikamu chakakosha. Shades yesirivheri ndeimwe yeinoregerera zvakanyanya, zvakanyanya kushomeka kuburitsa tsvina uye scuff mamaki.
Saizvozvo, mimvuri ye champaign uye yebhuruu (kunyanya esimbi), ivowo vanokanganwira. Neimwe nzira, yakasimba mwenje mimvuri, senge chena uye yero, uye pastels senge pingi, zvinoratidzira zviri nyore magrimp uye scuff mamaki, izvo zvinoita kuti zvisave zvakakodzera kukodzera kwenguva refu.
Nhema ivara rinodiwa nevaya vanoda kwavo mavhiripu ku "sanganisa mukati", vamwe vasingade kudaidza chero kutarisa kwavari. Asi zvakadaro, zvinonakidza inyaya yekuti iyo-nhema dema yekumusoro inogona kuita zvimwe mavhiripu zvinoita kunge "zvinorema" kupfuura zvazviri chaizvo, zvichikanganisa kutaridzika uye kunzwa kwakanaka.
va neruvara wiricheya
Vatengi vanowanzo taura vachida chaicho chine mavara wiricheya yezvinangwa zvekuchengetedza, uchifunga kuti neon green furemu, semuenzaniso, inogona kuvaita kuti vaoneke zvakanyanya pakati penzira yemugwagwa.
Zvisinei, wiricheya chimiro chevaravara haisi iyo yakakodzera nzira yekuonekwa. Sarudza iyo furemu ruvara iwe unonyatsoda zvakakwana, zvisinei siya basa rekuonekwa kune yechokwadi sarudzo yeanotsva jekete reorenji, vesti, kana mureza wakakwira kumusoro uko kwaanoonekwa chaizvo.
A wiricheya Kuzvipira Kwemakore mashanu
Cherechedza kuti wiricheya zvitaera zvinowanzochinja nekufamba kwenguva, kunyangwe zvaunofarira zvinochinja nekufamba kwenguva. Saka iwe unonyatsoda kufunga nezve yako sarudzo yemavara, kunyanya kana iri inotyisa. Ndichada uyu muvara mumakore mashanu? Kana iwe uchifanira kufunga kaviri, iwe unogona kuve zvirinani uine rakachengeteka ruvara.
Muchokwadi, sezviri pachena kuzviisa pasi sekusarudza a wiricheya Ruvara rungangodaro, kana munhu akashandisa imwe nzira kwariri - uchifunga nezvetarisiro yenguva refu, uchinyatso kuona kuti inoratidza sei kutenderedza kutaridzika, uye kuve nechokwadi kuti iwo ruvara iwe raunogona kutsungirira kweanosvikira makore mashanu - inogona kuva sarudzo yakapusa, inonzwisisika, uye inogutsa.
Mukupedzisira, kana munhu akasarudza vara rakapfeka zvakanaka munzvimbo dzese - rinotaridzika zvakanaka kumuridzi waro uye nevamwe mukufamba kwenguva - ndiwo iwo ruvara rwakakwana kwauri!